world places Archives - Page 43 of 51 - Thutazone
မြောက်ဝန်ရိုးစွန်း အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ရေးသားသူ - Paing Hmu Ko(MYMC Club) မြောက်ဝင်ရိုးစွန်း (North Pole) ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်မှာ ရှိတာလဲ။ သူနဲ့ ပတ်သက်သမျှ စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်း အရာ တွေကို တင်ဆက် ...
ကမ္ဘာကျော် အန်ကောဝပ် ဘုရားကျောင်းကြီးအကြောင်းသိကောင်းစရာ
(တစ်) အန်ကောဝပ် (Angkor Wat) ဟု ဆိုလိုက်သည်နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံထဲက ကမ္ဘာကျော်ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ကြီးတစ်ခုကို လူတိုင်းလူတိုင်း မျက်လုံးထဲတွင် ပြေး၍ မြင်မိကြစမြဲဖြစ်ပါသည်။ ဝပ် (Wat) ဆိုသော စကားလုံးက ကျောင်းကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ ရိုးရိုးကျောင်းမဟုတ်။ ဘာသာရေးနှင့် ...
ကြယ်ပြာကမ်းခြေ အမှတ်တမဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ တကယ့်အစစ်လို့ထင်မှာ မဟုတ်ပဲ ပိုတိုရှော့ ဒါမှမဟုတ် ရုပ်ရှင်ထဲကလို့ထင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာဟာ မော်လဒိုက်နိုင်ငံ ကမ်းခြေမှာ တကယ်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကမ်းခြေသဲပြင်ရေစပ်မှာ ကြယ်ပြာလေးတွေ တလက်လက်တောက်ပနေသလိုဖြစ်နေရခြင်းအကြောင်းကတော့ အလွန်သေးငယ်တဲ့ bio-luminescent phytoplankton လေးတွေကြောင့်ပါတဲ့။ ...
The Gate of the Sun ဆိုတာ ဧရာမကျောက်တုံးကြီးကို ထွင်းထုတည်ဆောက်ထားတဲ့ ဂိတ်တံခါးပေါက်ပုံစံ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံ က ကမ္ဘာကျော် Titicaca ရေကန်ကြီးအနီးမှာတည်ရှိပြီး လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၁၅၀၀ ဝန်းကျင်ခန့်က ရှေးဟောင်း Tiwanaku ...
ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံး မီးတောင် (သို့) ဗီဆူးဗီးယပ်မီးတောင်ကြီး အကြောင်း
ဗီဆူးဗီးယပ်မီးတောင်သည် ကမ္ဘာ ပေါ်တွင် အထင်ရှားဆုံး သော မီးတောင်တစ်ခု ဖြစ်၏။ မြို့ပေါင်းရွာပေါင်းများစွာကို ဖျက်စီးပစ်ခဲ့သည့် ဥရောပတိုက်၏ တစ်လုံးတည်း သော မီးရှင်တောင် ဖြစ်သည်။ အီတလီနိုင်ငံ နေပယ်ပင်လယ် အော်ပေါ်တွင် တည်ရှိ၍ နေပယ်မြို့မှ အရှေ့တောင်ဘက် ...
ကမ္ဘာ့တတိယအကြီးဆုံး ဆာဟာရသဲကန္တာရကြီး အကြောင်းသိကောင်းစရာ
ဆာဟာရ သဲကန္တာရကို တတိယအကြီးဆုံးလို့ဆိုလိုက်တဲ့အတွက် တချို့မိတ်ဆွေတွေ စိတ်ထဲ တစ်မျိုးထင်သွားနိုင်ပါတယ်။ အများစုက ဆာဟာရ ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံး သဲကန္တာရ လို့သိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ ဆာဟာရဟာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအပူပိုင်းသဲကန္တာရဖြစ်ပြီး သဲကန္တာရထဲမှာတော့ တတိယအကြီးဆုံးသာဖြစ်ပါတယ်။ ဆာဟာရရဲ့ရှေ့မှာ အန္တာတိကသဲကန္တာရ ၊ အာတိတ်သဲကန္တာရ ...
Page 43 of 51 Prev 1 … 42 43 44 … 51 Next